စပါးမှာ မော်ရင်ဟို အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား? | FOX Sports Myanmar
ပရီးမီးယားလိဂ် (PL) | နိုဝငျဘာ 20, 2019
စပါးမှာ မော်ရင်ဟို အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား?
စပါးကတော့ နည်းပြသစ်အဖြစ် မော်ရင်ဟိုကို ခန့်အပ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါဟာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ မော်ရင်ဟိုကို သူတို့က ခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ စပါးအသင်းရဲ့အနာဂတ်က ပိုမိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာခဲ့ပါပြီ။ အသင်းမှာ ၅ နှစ်ကြာရှိနေခဲ့ပြီးနောက် အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခုကို ပိုချက်တီနိုက ပုံဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီရာသီအစောပိုင်းရလဒ်တွေက သူ့ကို တော့တင်ဟမ်နဲ့ လမ်းခွဲရစေဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူ့နေရာမှာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာမယ့် မော်ရင်ဟိုရော စပါးမှာ အောင်မြင်ပါ့မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
မော်ရင်ဟိုရဲ့ နည်းပြဘ၀နှောင်းပိုင်းကာလတွေက သိပ်တော့မကောင်းလှပါဘူး။ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ယူနိုက်တက်ကနေဆိုရင် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ အသင်းကို သူက ပထမဆုံးရာသီတွေမှာ အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်နိုင်ပေမယ့် နောက်ရာသီတွေမှာဆိုရင် ကစားသမားတွေနဲ့အဆင်မပြေတာ၊ အသင်းကစားပုံအားနည်းသွားတာတွေက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ သူ ချေဖျက်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။ ပထမရာသီနဲ့ ဒုတိယရာသီမှာ မော်ရင်ဟိုကို အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ မြင်တွေ့နိုင်ပေမယ့် တတိယမြောက်ရာသီကတော့ သူ့အတွက် ကျိန်စာဆိုးအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သူနည်းပြခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း အသင်းတစ်သင်းကို ၃နှစ်ထက်ပိုပြီးတော့ မကိုင်တွယ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါက အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်နဲ့လည်း ကိုက်ညီနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇအရ စကားပြောဆိုမှုတွေကလည်း အသင်းတွင်းမှာ ကစားသမားတွေ၊ အရေးကြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ စပါးမှာလည်း ဒီလိုအခြေအနေကို သူ ကြုံတွေ့ရဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ သူ့ဘက်က ဒါတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ စပါးမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားက လက်ချိုးရေတွက်လို့ရလို့ သူထိန်းသိမ်းရတော့ လွယ်ကူမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အခုဆိုရင် မော်ရင်ဟို ရင်ဆိုင်ရမယ့် အသင်းဟောင်းက နှစ်သင်းဖြစ်လာပါပြီ။ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှာဆိုရင် သူက ယူနိုက်တက်နဲ့ ပြန်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။ ဒါ့အပြင် စပါးက အဆင့် ၁၄ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီအနေအထားကနေလည်း လွန်မြောက်နိုင်ဖို့ မော်ရင်ဟိုက ကြိုးစားပေးရဦးပါမယ်။ သူ့ရဲ့ စပါးနည်းပြဘ၀အစကတော့ စကတည်းကယဉ်သကိုကိုဆိုသလိုပါပဲ။ ဆိုးရွားနေတဲ့ အသင်းတစ်သင်းကို သူက ပြန်ထူထောင်ပေးရတော့မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးကို ဒုတိယမြောက်ပြန်ရောက်လာချိန်၊ ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာချိန်မှာလည်း အဲဒီအသင်းတွေက ဆိုးရွားနေတဲ့အနေအထားတွေမှာပါ။ ဒါကြောင့် မော်ရင်ဟိုအတွက် သိပ်တော့ထွေထူးနေမယ်တော့မထင်မိပါဘူး။ တစ်ခုပါပဲ။ သူ စပါးမှာ တကယ်ပဲ အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား။ မှေးမှိန်စပြုနေခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုပြန်ပြိးတော့ တောက်ပလာအောင် ဖန်တီးနိုင်မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်သွားရတော့မှာပါ။
စပါးကတော့ နညျးပွသဈအဖွဈ မျောရငျဟိုကို ခနျ့အပျလိုကျပါပွီ။ ဒါဟာ ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲ မျောရငျဟိုကို သူတို့က ချေါယူစာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ စပါးအသငျးရဲ့အနာဂတျက ပိုမိုပွီးစိတျဝငျစားစရာကောငျးလာခဲ့ပါပွီ။ အသငျးမှာ ၅ နှဈကွာရှိနခေဲ့ပွီးနောကျ အကောငျးဆုံးအနအေထားတဈခုကို ပိုခကျြတီနိုက ပုံဖျောပေးနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒီရာသီအစောပိုငျးရလဒျတှကေ သူ့ကို တော့တငျဟမျနဲ့ လမျးခှဲရစဖေို့ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ သူ့နရောမှာ အစားထိုးဝငျရောကျလာမယျ့ မျောရငျဟိုရော စပါးမှာ အောငျမွငျပါ့မလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
မျောရငျဟိုရဲ့ နညျးပွဘဝနှောငျးပိုငျးကာလတှကေ သိပျတော့မကောငျးလှပါဘူး။ ခယျြလျဆီးနဲ့ ယူနိုကျတကျကနဆေိုရငျ ထုတျပယျခံခဲ့ရတာပါ။ အသငျးကို သူက ပထမဆုံးရာသီတှမှော အကောငျးဆုံးကိုငျတှယျနိုငျပမေယျ့ နောကျရာသီတှမှောဆိုရငျ ကစားသမားတှနေဲ့အဆငျမပွတော၊ အသငျးကစားပုံအားနညျးသှားတာတှကေ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီမှတျတမျးတှကေိုတော့ သူ ခဖြေကျြပွနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာပါ။ ပထမရာသီနဲ့ ဒုတိယရာသီမှာ မျောရငျဟိုကို အကောငျးဆုံးပုံစံနဲ့ မွငျတှနေို့ငျပမေယျ့ တတိယမွောကျရာသီကတော့ သူ့အတှကျ ကြိနျစာဆိုးအဖွဈ ရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။
သူနညျးပွခဲ့တဲ့သကျတမျးတဈလြှောကျမှာလညျး အသငျးတဈသငျးကို ၃နှဈထကျပိုပွီးတော့ မကိုငျတှယျခဲ့ဘူးဆိုတာ တှရေ့မှာပါ။ ဒါက အပျေါကပွောခဲ့တဲ့အခကျြနဲ့လညျး ကိုကျညီနပေါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပငျကိုယျဗီဇအရ စကားပွောဆိုမှုတှကေလညျး အသငျးတှငျးမှာ ကစားသမားတှေ၊ အရေးကွီးတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ အဆငျမပွမှေုတှေ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ စပါးမှာလညျး ဒီလိုအခွအေနကေို သူ ကွုံတှရေ့ဦးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ သူ့ဘကျက ဒါတှကေို ပွငျဆငျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ စပါးမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားက လကျခြိုးရတှေကျလို့ရလို့ သူထိနျးသိမျးရတော့ လှယျကူမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
အခုဆိုရငျ မျောရငျဟို ရငျဆိုငျရမယျ့ အသငျးဟောငျးက နှဈသငျးဖွဈလာပါပွီ။ ခယျြလျဆီးနဲ့ ယူနိုကျတကျတို့ဖွဈပွီး ဒီဇငျဘာလ ၄ရကျနမှေ့ာဆိုရငျ သူက ယူနိုကျတကျနဲ့ ပွနျရငျဆိုငျရတော့မှာပါ။ ဒါ့အပွငျ စပါးက အဆငျ့ ၁၄ နရောမှာ ရှိနပေါတယျ။ ဒီအနအေထားကနလေညျး လှနျမွောကျနိုငျဖို့ မျောရငျဟိုက ကွိုးစားပေးရဦးပါမယျ။ သူ့ရဲ့ စပါးနညျးပွဘဝအစကတော့ စကတညျးကယဉျသကိုကိုဆိုသလိုပါပဲ။ ဆိုးရှားနတေဲ့ အသငျးတဈသငျးကို သူက ပွနျထူထောငျပေးရတော့မှာပါ။
ဒါပမေယျ့ ခယျြလျဆီးကို ဒုတိယမွောကျပွနျရောကျလာခြိနျ၊ ယူနိုကျတကျကို ရောကျလာခြိနျမှာလညျး အဲဒီအသငျးတှကေ ဆိုးရှားနတေဲ့အနအေထားတှမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ မျောရငျဟိုအတှကျ သိပျတော့ထှထေူးနမေယျတော့မထငျမိပါဘူး။ တဈခုပါပဲ။ သူ စပါးမှာ တကယျပဲ အောငျမွငျနိုငျပါ့မလား။ မှေးမှိနျစပွုနခေဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျတှကေိုပွနျပွိးတော့ တောကျပလာအောငျ ဖနျတီးနိုငျမလားဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့သှားရတော့မှာပါ။
Home Football Premier League စပါးမှာ မော်ရင်ဟို အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား?